AT&T: Ny manaraka AIG? | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 30, 2009 Zoma, Martsa 11, 2016 Douglas Karr
Saika isan'andro isan'andro mody aho dia mahazo mailaka mivantana tsara avy amin'ny AT&T momba ny U-Verse. Namidiny aho. Ilaiko io. Mila fonosana 'ol matavy be aho miaraka amin'ny hafainganam-pandeha fampidinana, ny fahaizana mandrindra ny fandaharana amin'ny fahitalavitra, ny DVR… Tiako daholo izany.
Saingy tsy azoko izany.
Manaraka ny torolàlana amin'ny iray amin'ireo sombin-taratasy mivantana azoko volana lasa izay, nandeha namaky ny fizotrany manontolo tamin'ny Internet aho. Fenoy ny saha rehetra, tsindrio ny alàlan'ny pejy fampahalalana tsy misy farany, nametrahako fotoana nifanaovana… mba hahazoana valiny ihany any am-parany rehefa mandeha ny fangatahana fa misy olana amin'ny fangatahana ary mila miantso ny AT&T aho.
Ny zavatra farany tiako hatao dia ny miantso AT&T.
Nanana ahy ianao, AT&T! Manorata taratasy fotsiny aho dia lazao amiko izay mitranga. Misy olana ve ny kaontiko ankehitriny? Izaho dia mpividy anao nandritra ny 7 taona - hatramin'ny nifindrako tany Indianapolis. Misy olana ve ny adiresy? Tsy misy ve?
Na dia tsy miraharaha ahy aza ianao, azonao atao ve ny mijanona tsy mandefa ireo brochure miloko 4 manintona amin'ny adiresiko isan'andro? Mba miangavy re?! Tsy maintsy mandany $ 10 ka hatramin'ny $ 25 isam-bolana ianao mba hanandramana mivarotra U-Verse… ary amidy aho. Tsy hanidy ny fifampiraharahana tsotra izao ianao ary tsy fantatro ny antony. Ianao no tadiaviko, sa tsy izany? Antsoy aho! Tsy sarotra ny mikosoka ny lisitra misy anao eo anelanelan'ny angona an-tserasera sy ny fampielezana mail anao mivantana, afaka manangona vola be ianao
Mandritra izany fotoana izany dia manadino ny fahafahako ianao, nahatsikaritra fa ny mpiasao dia saika hitokona… Eo afovoan'ny fitotonganana. Namaky an-tserasera aho fa tsy hamaly ny fangatahana miaro ny asan'ny miaramila reservistra ianao, tsy ho azo antoka fa manana savony sy taratasy fidiovana ny trano fidiovana, ary tsy manome fiakarana ho an'ny mpiasa mandritra ny taona vitsivitsy ianao - avy eo 2% avy eo taona manaraka.
2% eo afovoan'ny fitotonganan'ity resa-be ity dia toa tsy mahatsiravina… mandra-pamaky fa tsy hanarona ny fiakaran'ny vidin'ny fitsaboana izany.
Ary avy eo dia novakiako ny momba ny CEO anao Randall Stephenson izay nilatsaka 15 tapitrisa dolara isan-taona ny tambin-karama, na dia nitombo 22% aza izany vola izany. Tafiditra tao anatin'izany ny $ 376,000 amin'ny tombam-bidy, anisan'izany ny $ 142,000 amin'ny fandaniana amin'ny famindran-toerana, $ 83,000 ho an'ny fampiasana manokana ny jet AT & T's corporate, ary $ 14,000 amin'ny torohevitra ara-bola.
Tamin'ny 2008, na teo aza ny toe-karena ary tsy mpanjifa U-Verse aho… tamin'ny 2008, nahazo $ 12.9 miliara ny AT&T, tafakatra 12.0 miliara dolara tamin'ny taona lasa. Ny fivarotana dia nitentina $ 124 miliara raha $ 119 miliara. Ka nitombo 4.2% ny orinasanao ary nitombo 7.5% ny karamanao nefa tsy azonao omena fiakarana karama akory ny mpiasanao?
Te hanana iPhone koa aho. Saingy tsy azoko antoka fa afaka manohana orinasa mandraraka vola amin'ny trano fidiovana aho, mety hahazo tombony amin'ny fonosana manaitaitra (tadidio fa ny broadband dia ampahany amin'ny fonosana), ary mitondra ny mpiasa ao aminy ho toy ny tsy fahampiana. Tsy bandy sendika mihitsy aho - fa amin'ity tranga ity dia mety hampifaly azy ireo aho.
Tags: amin'ny & Tmail mivantanarandall stephensonU-andininy
Ahoana no ahazoan'ny Analytics an'izany info rehetra izany?
Mar 30, 2009 ao amin'ny 4: PM PM
Mila iPhone aho fa tsy manana vola ampy; - (((
Apr 1, 2009 ao amin'ny 1: PM PM
Tena tiako ianao… ny bilaoginao no manoratra ahy